PHOTOSHOP မှာဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် - PHOTOSHOP ကို - 2019
လူအတော်များများသငျသညျက၎င်း၏အရွယ်အစားလျှော့ချအောင်မြင်ရန်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရှေ့မှာသိပ်အာကာသကြာလျှင်, ဖိုင်ကို format ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ converters အဖြစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျဖိုင်တွေ 50 built-in ကို formats မဆိုအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်တယ် FFCoder ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့အသေးစိတ်အတွက်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ဒါဟာအသုံးပြုသူအားလုံးကိုလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ FFCoder မျိုးစုံစာရွက်စာတမ်းများတစ်ပြိုင်နက်အပြောင်းအလဲနဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျတစျဦးစီပြောင်းလဲခြင်း parameters တွေကိုစိတ်ကြိုက်များအတွက်လိုအပ်သောဗီဒီယိုကိုသို့မဟုတ်အသံဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကိုလုံလောက်အောင်အဆင်ပြေဖန်ဆင်းထားသည် - အာကာသကိုတက်ရှုပ်ပွနေအောင်မရှိသမျှကိုမရရှိနိုင်ကို formats pop-up menu ထဲမှာဝှက်ထားကြသဖြင့်, အပိုဆောင်း setting များကိုသီးခြားစီဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
အဆိုပါ software ကို encoding ကရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်းအသက် 30 ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှအထူး list ကနေလိုချင်သောရွေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးမဟုတ်ကို formats စာရွက်စာတမ်း၏အရွယ်အစားချုံ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်, အခြို့, ဆန့်ကျင်ပေါ်, ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးမြှင့် - converting တဲ့အခါမှာအကောင့်ထဲကိုယူပါ။ မူရင်းဖိုင်ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ window တွင်ခြေရာကောက်ရန်အမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အများအပြား parameters တွေကိုနီးပါးတိုင်း format နဲ့ရရှိနိုင်ပါအသေးစိတ် setting ကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင်ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Config"။ မတူညီသောဇုန်နှင့် matrix ၏ရွေးချယ်မှုများထို့အပြင်ပြီးသွားအချိုးအရွယ်အစားကနေ / အရည်အသွေးမြင့်အချက်များကိုတစ်ဗဟု, ရှိပါသည်။ ဒီ function ဘာသာရပ်နားလည်သောသူအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်သာအသုံးဝင်သည်။
နောက်တစ်နေ့ကို item အဆိုပါ codec ကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်တယ်, သူတို့မှာလည်းအလွန်ဖြစ်ကြပြီးနောက်ဆုံးဖိုင်ရွေးချယ်ထားအရည်အသွေးနှင့်အသံအတိုးအကျယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျနှုတျယူ codec ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်မနိုင်လျှင်, select လုပ်ပါ "Copy ကူး"နှင့်ပရိုဂရမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခံရဖို့အရင်းအမြစ်ဖိုင်ထဲတွင်ကဲ့သို့တူညီသော settings ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
အသံ codec ၏ရွေးချယ်မှု
အသံအရည်အသွေးကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, ဒါမှမဟုတ်, ဆန့်ကျင်အပေါ်ဖြစ်သင့်လျှင်နောက်ဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားအနည်းငယ် megabytes ကယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်, သငျသညျအသံ codec ၏ရွေးချယ်ရေးအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုဗီဒီယို၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, သင်မူရင်းစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူကိုရှေးခယျြ, ဒါမှမဟုတ်စကားအနိုင်ပါတယ်။
အသံလည်းအနည်းငယ် configuration ကိုပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ အဆိုပါရရှိနိုင်နည်းနည်းမှုနှုန်းနှင့်အရည်အသွေး configuring အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါထိတွေ့ parameters တွေကိုကနေအတွင်းဝှက်ဖိုင်အသံပုဒ်၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အရည်အသွေးပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ညာဘက်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့် setting များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ရှိရာ preview ကို mode ကိုမှသွားနိုင်ပါတယ်အရင်းအမြစ်ဗီဒီယိုပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။ ဒီ feature ကသင်၏ settings ကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်နောက်ဆုံးရလဒ်အပေါ်အပိုငျးအအမျိုးမျိုးတွင်ထင်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းလုံးဝသေချာမသိကြသူတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုချုံ့ခြင်းအခြား window တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စ Going ကိုလည်းမူရင်းစာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင် right-click နှိပ်. ထွက်ယူသွားတတ်၏။ အဲဒီမှာမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာဖြစ်စေဘက်မှာတခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညွှန်ကိန်းထိပ်တန်းမူရင်းပုံရိပ်နှင့်လက်ရှိပြည်နယ်ကိုဖော်ပြရန်။ ထို့ကြောင့်ချုံ့အဆိုပါကြိတ်စက်၏အသံအတိုးအကျယ်တစ်အစွန်းရောက်လျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
စီမံကိန်း loading ပြီးနောက်သင်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအတိအကျကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်၎င်းတို့၏ ID ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေပမာဏ, pixel format နဲ့, width နဲ့ပုံရဲ့အမြင့်နှင့်ပိုပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ကို၏အသံလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေးကဒီ window ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကဏ္ဍများကိုအဆင်ပြေဘို့ပိုင်ထိုက်သောစားပွဲပေါ်မှာကွဲကွာနေကြသည်။
လူအပေါင်းတို့သည် setting များကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သူတို့ကိုစစ်ဆေးသင်တို့ရှိသမျှသည်စာရွက်စာတမ်းများ converting စတင်နိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အခြေခံအချက်အလက်ကိုပြသသည့်အပိုဆောင်း window ကိုဖွင့်လှစ်: အရင်းမြစ် file ကိုအမည်, အရွယ်အစား, အခြေအနေ, နှင့်နောက်ဆုံးအရွယ်အစား။ ထိပ်တန်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် CPU အသုံးပြုမှုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်လျော့ချသို့မဟုတ်ခေတ္တနားပေါ်လုပ်ငန်းစဉ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်လျှင်။ သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စီမံကိန်း folder ကိုကယ်ဖို့ Going ။
ကို formats နှင့်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါ;
အသေးစိတ်ပြောင်းလဲခြင်း setting ကို။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုမရှိတော့ developer ကထောက်ခံသည်။
FFCoder - ပုံစံနှင့်ဗီဒီယိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်ပင်သောသူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူးသူကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲမယ့်စီမံကိန်းကိုကို set up နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲရှားပါးတည်းဟူသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါ။
Ummy Video Downloader ဟမ်းစတားအခမဲ့ Video Converter အခမဲ့ YouTube ကို Downloader က MP3 Converter မှအခမဲ့ Video
FFCoder - ဗွီဒီယို format ကိုနှင့် codec အပြောင်းအလဲများကိုပြောင်း program တစ်ခု။ အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်ကကျစ်လစ်သိပ်သည်း interface ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူမှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးကိုရှိပါတယ်။
Size: 37 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: I hired people to photoshop me "hotter" (အောက်တိုဘာလ 2019).